Nepal Deep | नेपाली उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म ल्याउन ‘सप्लाइ चेन’को विकास गर्नुपर्छ: अम्बिका पौडेल
नेपाली उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म ल्याउन ‘सप्लाइ चेन’को विकास गर्नुपर्छ: अम्बिका पौडेल
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले पुँजी बजारको नियामक निकायको संरक्षकको भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वकै कारण लगानीकर्ताहरुले लगानी गुमाउने स्थिति अझै बनिरहे अबको आम चुनावमा त्यसको असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालदीप अनलाइन मिडियाका प्रधानसम्पादक कृष्ण पौडेलसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्।
पौडेलले भने, ‘अहिले करिब करिब ५० लाख भन्दा बढी डीम्याट एकाउन्ट छ। यो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा हो। र, ५० लाख व्यक्तिहरुले बिना कारण पटक पटक पुंजी बजारबाट गुमाइ रहँदा, संरक्षकले संरक्षण नदिएको कारण, संरक्षकले लिएको गलत नीतिका कारण गुमाइ रहने स्थिति रह्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन चुनावमा हुँदैन र? उसले विवेक प्रयोग गर्दैन र? अवश्य हुन्छ। त्यसैले ठूलो जनसंख्या यसमा आवद्ध छ। बजार घट्नु र बढ्नु सुन्दर पक्ष हो। तर बजार घट्नको लागि गरिने कार्यहरु लगानीकर्ताको लागि क्षम्य हुँदैन। त्यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनमा हुनसक्छ।’
पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी अपरिहार्य भएको बताए। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको लागि बजार सहजै उपलब्ध हुने भएकोले सर्भिस सेक्टरबाट अब कृषिमा लगानीकर्ताको ध्यान सिफ्ट गर्नुपर्ने बेला भएको बताए। कृषिमा अहिलेको समस्या भनेको ‘सप्लाई चेन’मा रहेको पौडेलले औंलाए।
पौडेलले भने, ‘मनाङ-मुस्ताङ, कर्णालीको स्याउ काठमाडौँ आउँदैन। धेरै गाह्रो छ कलेक्सन गरेर आउँदैन। त्यहिँ कुहिएर गइरहेको छ। काभ्रे धादिङको तरकारी जुन सहजताका साथ आउनु पर्ने हो त्यस किसिमले आउन सकेको छैन। तर सहज रुपमा चाइनाको स्याउ र भारतको तरकारी काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ। त्यो अवस्थामा हामीले ‘सप्लाई चेन’ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले हाम्रा किसानहरुलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने समस्या नआवोस्।’
त्यस्तै, पौडेलले दुई छिमेकी देशको बजार उपयोग गर्ने भन्ने सपना देख्नु भन्दा नेपालमा नै उत्पादन हुने र खपत हुने वस्तुहरुको उत्पादन बढाउन तर्फ लाग्नु नै हितकर हुने बताए। उनले भने, ‘हामीले भयङ्कर ठूला कुरा गरेर हाम्रा छिमेकी देशहरु ठूला छन्, हामीले निर्यात गरेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने कल्पना त धेरै राम्रो हो। गर्न सके त। तर त्यो सम्भावना विविध कारणले धेरै च्यालेन्जिङ छ। हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो देशमा नै उत्पादन र खपत हुने कुरा र सेवाको आयात घटाउने। किनकी त्यसको लागि त हामीसँग रेडिमेड बजार छ। बाहिर के होला कसो होला भन्नै परेन। हामीले फरक किसिमले अघि बढ्यौ भने हामी सफल हुन सक्छौ। देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ, किसानको उत्थान हुन्छ।’
अन्तर्वार्ताको पूरा भिडियो: